Article 264 Criminal Code (njengoba uchitshiyelwe) uhlinzekela ukuba secaleni ukwephulwa traffic obusa kuncike mechanical ukulawula imoto uma ngokunganakiwe yomonakalo ethuneni empilweni. Ake sicabangele eminye imininingwane izinga.
Article 264 of Criminal Code: isijeziso
Ngenxa yokwephula imithetho yemigwaqo kumbe izinqubo yokusebenza nazo TC umphathi tram, imoto nezinye imoto embonini yezezimoto, ngokunganakiwe yomonakalo ethuneni ezempilo, kucatshangwa:
Okungenani eminyakeni engu-3 imingcele inkululeko.
Ophoqelelwe kuze kube iminyaka engu-2. Ngaphezu kwalokho, inkantolo kungenzeka ukuthi abeke kuvinjelwe kokwenza umsebenzi othile noma ukuchayeka izikhundla ezithile akuzona esingaphansi 3 iminyaka.
Ukuboshwa izinyanga eziyisithupha.
Aboshwe isikhathi kuze iminyaka 3. Ngaphezu kwalokho, inkantolo kungenzeka ukuthi abeke kuvinjelwe umsebenzi imisebenzi ethize noma khona abasezikhundleni ezithile ngesikhathi esifanayo.
Article 264 of Criminal Code (Part II) usungula umthwalo izenzo ngenhla benziwa kuncike esimeni lokudakwa. Kulokhu, isephulamthetho esabisa omunye izinhlawulo:
Ophoqelelwe futhi iminyaka engu-3.
Ukuboshwa kuze iminyaka 4.
Ngaphezu ngamunye izinhlawulo ngenhla ukungezwa ukuvinjelwa umsebenzi imisebenzi ethize noma uhlale ezinye izikhundla kuze iminyaka 3.
Article 264, ingxenye 3, the Criminal Code ichaza umthwalo non-SDA noma mayelana nokusebenza imoto, ngenxa yobudedengu sabulala umuntu. Ukuze isephulamthetho izenzo ezinjalo esiyakuqokwa:
Ophoqelelwe iminyaka engu-4.
Kufika iminyaka 5 ejele.
Ngaphezu kwalokho, i-h isenzo. 3 sihloko 264 we Criminal Code iyakwenqabela umsebenzi imisebenzi ethize noma uhlale at izikhundla ezithile kuze kube 3 iminyaka. Kuleso simo, uma kufa umuntu oyedwa kwaba umphumela ukwephula imithetho yomgwaqo noma mayelana nokusebenza imoto, isihloko ephelele esimweni zokudakwa, isakhamuzi ezisengozini ngokuvalelwa ejele iminyaka 2-7. Kulokhu, ngaphezu ke ngeke bavunyelwe ukuba bafeze imisebenzi ethile noma abe phezu izikhundla ezithile engafika ku-3 iminyaka. Endabeni ukufa kwabantu 2 noma ngaphezulu aqokwe:
Kufika iminyaka 5 ngempoqo.
Kufika iminyaka 7 ejele.
Izinhlawulo wabuye wathi icala kuvinjelwe kokuba izikhundla ezithile noma kokwenza imisebenzi ethize iminyaka engu-3. Uma ukufa kwabantu 2 noma ngaphezulu kwakusuke kuwumphumela ukushayisana isimo zokudakwa, lowo okonile sabelwe ejele kuze iminyaka 9. Ngaphezu kwalokho icala kuvinjelwe izinhlobo ezithile zomsebenzi noma ukuchayeka izikhundla ezithile iminyaka engu-3.
Ngu enye indlela esebenza ngemishini kubhekwe kuyinsakavukela futhi Article 264,1 we Criminal Code sihlinzekela self ezinezinjini umgwaqo wokwakha nezinye imishini, kogandaganda, kanye nezinye imoto, ukulawula enikeza amalungelo akhethekile. Njengoba isihloko, ngihlala isimo zokudakwa, umuntu aze enze uma ibhekene yokuthi basebenzisa izinto utshwala ezisekelwe. Ukuba khona kwabo emzimbeni khona ngokuphelele ETHYL utshwala ngemali edlula kungenzeka jikelele Iphutha nesilinganiso ngaphansi komthetho. Isihloko liyatholakala ukuba isimo zokudakwa, uma kuqinisekiswa ukuthi ukwamukelwa psychotropic / izidakamizwa, noma uma lowo muntu uye wenqaba ibhekane medosvidetelstvovaniya ngezizathu futhi ngendlela enqunywe yilo iziqondiso.
Article 264 of Criminal Code of the Russian Federation ngamazwana
imibuzo Jikelele ezihlobene ziqu ubugebengu, echaza Lesinqumo LoMkhandlu Plenum yenomboro ilanga 25 kusukela 09.12.2008 Isenzo, umthwalo okuyinto kuqinisekiswa Article 264 of the Code Criminal, siqondiswe ukuphepha ukusetshenziswa imoto. Njengoba into eminye siphumelelisa loku ukuphila nempilo ngabanye.
Them imoto lokukhanda. Kufanele kube self ezinezinjini, ukuthi ifakwe injini ezizimele. Article 264 of Criminal Code libhekisela uhlobo oluthile imoto. Lezi zihlanganisa, ngokukhethekile, zihlanganisa trams, izimoto. Imoto ngenjongo yokucabangela neyaziwayo namazinga nezinye imoto yokusebenza ezokuthutha ngqo hhayi kuphela, kodwa futhi neminye imisebenzi. Lezi ngokukhethekile zihlanganisa imfuyo (kwabavuni, isibonelo), umgwaqo (i-asphalt, ibanga kanye nokunye.), Ilayisha (Cranes, njll ..) Machine. Hhayi ubheke isigaba esibekiwe, eliqhutshwa mopeds imoto nezinye imishini, ivolumu displacement engesiyo ezingaphezu kuka-50 cm 3, kanye esiphezulu design izinga - hhayi ngaphezulu kuka-50 km / h, kanti amabhayisikili ifakwe injini noma ezinye izindlela elinezimfanelo ezifana .
Isihloko entsha 264 we Criminal Code sibeka ukuthi izifundo ebiza imoto ngenhla futhi ukuphulwa izimisele imithetho yomgwaqo noma imithetho wokusebenza wabo okuyinto ngokunganakiwe umlimaze esinzima empilweni noma kokushona komuntu, ngoba imbangela utawuba nelicala ngaphansi Ingxenye. 1 no 3 tbsp. 268. Lokhu kuma kokungathathi yesibili iphuzu isethi isinqumo okuzobe kukhona №25. Uma injini yemoto uhlulekile futhi idluliswa ngesandla, into isenzo sishoda. Eqinisweni ubugebengu kungenziwa wakufanelekela ukuhlukumeza imithetho ekhona for ukusebenza ephephile zokuthutha (Article 268). Umshini kungenziwa towed ngenye imoto, futhi zibashukumisele. Kulokhu, ayephuli umshayeli imoto zithutha imithetho esungulwe kuza umthwalo ukucabangela kuyinsakavukela.
Izidumbu zabantu abangu-uphenyo lokuqala futhi inkantolo kumele achaze maphuzu imithetho yomgwaqo noma umsebenzi imithetho adicilelwe ndaba, futhi yini ncamashi isenzo Yayinesikhwanyana ubuso. Uma iziboshwa agcinwa izinto ehlukile, ukuhlukumeza zazo ayihambisani nezimo ezingokoqobo leli cala, elamiswa ngePhentekoste umhlangano, ngokuhambisana nezinhlinzeko Art. 237 Ikhodi Criminal Procedure, ijaji ngokusuka kuyo siqu noma ngesicelo amaqembu ingase ibhekisele icala emuva umshushisi amacala ukubhalisa njengoba kufanele. Ngaphezu kwalokho, le nqubo akufanele elihlobene ne kwaqedwa nophenyo olwenziwa uphenyo lingaphelele noma kwesikhashana futhi akufanele sibe sibi isimo ummangalelwa.
Article 264 of Criminal Code ichaza umthwalo ngenxa yokwephula imithetho yomgwaqo noma umsebenzi imoto, ilimale kabi, ukufa umuntu oyedwa noma ngaphezulu. Ukushayela imoto - ukulawula umshini ngesikhathi ukuhamba kwayo. Iqala kusuka ngesikhathi uma imoto waqala, futhi uphethe stop yonkana chassis. Ukwephulwa oda ukushayela ungaboniswa, isibonelo, okwedlula ijubane travel ngokusebenzisa non-ekugcwalisekeni komyalelo wokungabi zemigwaqo, futhi ngakho kuyomfica okungalungile. Ukusebenza ngokuthi iqoqo imoto ezobuchwepheshe zenhlangano ukuze ukusetshenziswa okuphephile izinqubo ngokuhambisana izici nenjongo yawo. Ukwephula lezi zenzakalo ungaboniswa, isibonelo, ukuthuthwa wezimpahla oversized, upake endaweni engafanele, donsa intambo ku ongaphakeme, ukulawula ukudluliswa kusho nomuntu ongafanele, ukuthuthwa abagibeli phezu engakuhlomele kulo mshini, nokunye.
Article 264 of Criminal Code sisebenza kuphela uma ukuhlukumeza eyaletha imiphumela icala afanele. Ubudlelwano esiyimbangela isikhishiwe, uma lokungalandeli umthetho Yayingalungile. Ngokwesibonelo, abahamba ngezinyawo wubudedengu bakhe banyukubala ngaphansi isondo elingemuva noma ngamabomu waziphonsa ngaphansi kwemoto. Ukuba khona ukuxhumana ngokomzimba phakathi ezihambayo futhi bathuthe isisulu akubonisi ubuhlobo esiyimbangela. Itholakala bugebengu, umthwalo okuyinto kuqinisekiswa Article 264 we Criminal Code. uhlamvu normative kubangela isixhumanisi esiyimbangela ezimweni lapho kungekho ukuxhumana ngokomzimba. Ngokwesibonelo, umshayeli izobophezeleka umonakalo esimweni lapho izenzo zabo ezingalungile edala ukuphazamiseka ukunyakaza, lapho abanye abahlanganyeli baphoqeleka lokulimaza nezinye izinto. Ngakho, isakhamuzi owashiya kwindlela ezayo, kufanele ajeziswe imiphumela uma izithiyo umshayeli zadalwa ukulawula izimoto ophambana nazo, okuyinto ayikwazanga ukugwema ukungqubuzana ngokushesha bese ima, waxosha ungene eceleni komgwaqo washayiseka phezu komuntu ozihambelayo. Isenzo sokugcina kuyoba ufanelekele isidingo esibucayi noma ukulimala ubumsulwa.
ithuba Technical ukuze kugwemeke izingozi
Imithethonqubo ukusungula izidingo okuhloswe ngaso ekuvimbeni ukuphulwa. Kanjalo, umyalo kufanele ucacise impendulo somshayeli ukuze izenzo ezingekho emthethweni, bavumela abanye izifundo, kanye ukuvela izithiyo ahlukahlukene ukunyakaza ezijwayelekile. Ngokwesibonelo, isakhamuzi eliphuphuthekiswe ukukhanya ezayo izimoto musa ukuyimisa hit ingakenzeki ngenxa yalokhu, ukusebenzisa isihloko 264 we Criminal Code. Lapho ekuxazululeni impikiswano causality, inquma uma kukhona isihloko kungenzeka lobuchwepheshe ukuvimbela imiphumela. Uma bekungelona, futhi kunqunywa ukuthi le ngozi idalwe sokucasuka hhayi kuye kodwa ngamanye amalungu ukunyakaza, icala ayifakiwe. Lapho sinquma ukuthi impahla ukuxwayisa sigameko kumele isekelwe izimo zendlela ezandulela le ngozi. Ingozi traffic uthathwa wazithatha ngesikhathi ngale ndaba ithuba Injongo ukuthola ke.
I subjective ingxenye
Icala ngaphansi kwalesi sihloko zihlobene isigaba abangaqaphile. Ngu ngenhloso nokulimaza (isib hit isakhamuzi ukuziphindiselela) kunqunywa ehlasela ngabanye. Njengoba isihloko sihloko amazwana izenzo kwabalelwa abantu yemvelo ne engu-16 ekuphatheni imoto senzelwe ukuthuthwa kwezimpahla efakwe ke, noma abantu. Guilty kungenziwa waqaphela hhayi kuphela umshayeli, osanda kushona izivivinyo ezidingekayo futhi ithole ilayisensi, kodwa futhi yimuphi omunye umuntu, kuhlanganise omunye okuyiwona idokhumenti likhishwa ukuphulwa ngaphambili. Ngakho-ke, ngo-ngokucabangela izimo ezidingekayo ukunquma ngazo ukuthi isakhamuzi engalali amalungelo ukuthutha ukuphathwa ngaphansi Art. 12.8 kweKhodi Administrative iqiniso lokuba beshayela ngenkathi didekile. Uma kuqinisekisiwe, esekhonze isikhathi lesi sihloko sasho kufanele zifakwe inkathi isijeziso okwengeziwe icala lobugebengu ngesimo kuvinjelwe umsebenzi uhlobo oluthile. Ikakhulukazi, sikhuluma ukuhoxiswa ilungelo ukushayela izimoto.
Yini udinga ukushintsha umthetho maqondana ushintsho yegama?
Lwebulungisa France - isikimu. emakhotho akhethekileko. French Penal Code
I esiphundu kunazo ingulube izimbambo kuhhavini namazambane